Ma Ogtahay in Darajada ugu Sarayso ee la gaaro ay tahay in Bulshada loo adeego?
By ibrahim Aden shire August 31, 2017
Dhammaan aadanuhu wuxuu ka simanyahay jeceylka darajo sare iyo sumcad. Qof walba wuxuu rabaa in la ammaano, la xasuusto, magaciisuna uu jiro qaruumo badan. Sidoo kale, wuxuu ka simanyahay, marki laga reebo in naadir ah, inay u maraan hadafkaas sare waddo aan ahayn tii ay ku gaari lahaayeen.
Waxaan dadaal badan u galnaa sidaan maal ku tabci lahayn kaasoo aan filayno inuu na gaarsiin doono maqaam sare. Qaarkeen waxay dhiig u daadiyaan, maal u dhacaan ama maato u laayaan inay gaaraan hadafkaas sare. Qaar si nabad ah oo xeelad iyo xikmad la isku daray ah ayay kursi ku doontaan si ay xaqiijiyaan hadafka ugu danbeeyo oo ah inay magac sare yeeshaan, xasuusna reebaan.
Intaas oo dadaal ah marki la maro, cimrigu horay u batto, lafahu jilcaan, wax tarkuna koobnaado ayaan fahannaa waddadi saxda ahayd inaysan ahayn middi aan wax kuu doonaynay. Markaas ayay qaarkeena iska quustaan, qaarna is daba qabtaan oo is badal sameeyaan.
Waddada ugu sahlan ee lagu gaaro magaca ugu sarreeyo aduunka waa in dadka bilaash loogu shaqeeyo, waqtigaada aad ku bixiso caawin, taakulayn, horumarin iyo hagaajinta aadanaha. Jidkaan waa midkii ay qaadeen dhamaan Nabiyadii Eebe soo diray. Waxaad in badan Qur'aanka ku arkaysaa iyagoo leh maal idin waydiinsan mayno. kuwa badan oo ka mid ah sida Nabi Daauud, dhinac way ka xamaalan jireen, dhinacna dacwada ayay si bilaash ah uga wadeen.
Suubaheena SCW waad taqaanaan siiradiisa iyo siduu dadka ugu shaqyn jiray. Mar waa isagii yiri hadal macnihhisu ahaa "inaan bil masaajidka ku dhex cibaadaysto, aan soomo ama aan salaad u taagnaado waxaan ka jeclahay hal maalin oo aan qof muslim ah caawiyay". Sidaas ayay saxaabadii iyo kuwii wanaagsanaana ka barteen.
Haddaan eegno dunida aan maanta ku noolnahay ee gaaladu ugu tun weyntahay, waxaad arkaysaa in dhammaan kuwii ugu maalka badnaa ay yaqiinsadeen in maalkoodu xasuus ka reebi doonin. Tusaale, Bil Gate oo ahaa mar ninka ugu taajirsan aduunka ilaa hadana ka mid ah kuwa ugu lacagta badan inta nool, waa uu ka tagay shaqadiisi wuxuuna u jeestay inuu si bilaash ah ugu shaqeeyo aadanaha.
Wuxuu aasaasay hay'ad samafal oo magaciisa wadato taasoo u adeegto la dagaalanka Malaariyadda. Bil Gate wuxuu ogaaday haddii u dhinto isagoo shaqo bilaash ah aan qaban in magaciisu meesha ku hari doono laakiin haddii uu ka tago wax tar uu u sameeyay aadanaha muddo la xasuusan doono.
Adiguba caqligaada isticmaal. Waligaa ma maqashay hebal taajir ahaan jiray kun sano ama badan ka hor oo laga sheekeeyo? anigu waa ii dhimantahay. Isagoo arintaas ka duulayo ayuu Richard Bradson oo ah maal qabeen Ingiriis ah oo diyaarado iyo tareeno leh yiri "ma jiro qof lagu xasuusan doono maal uu tabcay, ee qofka waxaa lagu xasuusan doonaa waxa uu u qabtay aadanaha".
Dhinaca madaxda bal aan eegno. Bil Clinton oo ka mid ah madaxda ugu caansan qarnigaan soo martay wuxuu xaqiiqsaday inay lagama maarmaan tahay ku shaqaynta mushaar la'aan sidaa darteed ayuuna u aasaasay hay'ad magaciisa leh. Sidoo kale, Tony Blair wuxuu dhawaan sheegay inuusan lacag danbe ku qaadan doonin shaqooyinka uu qabanayo wixii soo galana ku siin doono hay'adaha samafalka. Ogow dadkaan waxay intaan oo dhan u samaynayaan waa in taariikhdu xusto.
Hadii aad tiraahdo kuwaanu waa kuwo xoolo ka dhargay oo rabo madadaalo kale, aan ku siiyo tusaale kale. Abdul Sattar Edhi wuxuu ahaa nin Pakistani ah oo isagoo aan waxba hayn go'aansaday inuu caawiyo dadka masaakinta ah ka dib markuu arkay inaysan jirin dowlad caawinayso. 1951 ayuu furay xarun dadka lagu daweeyo ugu danbayna hay'adiisi waxay noqotay hay'adda ugu weyn Pakistan ee dadka maasaakiinta ah caawiso. waxay furtay, iskoolo, madaaris, isbitaalo, guryo dadka masaakiinta la dajiyo. Isaguna wuxuu noqday dadka ugu caansan aduunka wuxuuna ku guulaystay abaal marino badan.
Waxaa uu yiri wariye u shaqeeyo joornaal kasoo baxo Ingiriiska oo la yiraahdo The Telegraph "waxaan la kulmay madaxweynayaal, raysul-wasaarayaal, wasiiro iyo madaxda ugu caansan aduunka, la kulmin qof karaamo leh ilaa aan la kulmay AbdulSattar Edhi. Markaan gacanta is galinay waxaan qalbigayga ka dareemay naxariis iyo dareen ruuxaani ah".
Cabdisattaar darajadi loo wada socday wuxuu gaaray isagoon waddo dheer iyo war-wareeg marin. Intii lixdan jir ku billaabi lahaa u shaqaynta ummada wuxuu go'aansaday inuu labaatan jir ku billaabo. Allaha u raxmadee wuxuu dhintay isagoo 82 jir ah cimrigiisina ku idlaystay sadaqo iyo u khidmaynta muslimiinta.
Haddi guushu ku xiran tahay waqtigeeda, aqoontaada iyo maalkaada hadba kaad hayso oo aad ooga faaiidayso dadkaada, maxaad meel kale u qarda-jeexi? Maxaa noo diidayo inaan hadaba bilowno howl aan billaabi doono mar aanan tabar hayn?